एक तकियाकस कसरी सिने?
प्रत्येक घरमा थुप्रै विभिन्न तकियाहरू छन्। तिनीहरूमध्ये हामी सुत्न सक्छौं। अन्यहरू इन्टरनेटको सजावटी तत्व हुन्, र तेस्रोमा, चलचित्र हेर्दा वा आकर्षक पुस्तक पढ्दा फ्लोरमा बस्न सजिलो छ। तर जो पनि प्रत्येक तकियाको कार्य गर्दछ, यसले आवधिक अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण, तपाइँलाई थाहा छ कि कसरी एक प्लोकोस सिलाई गर्ने भनेर यसले यसलाई प्रदूषणबाट सुरक्षित र उपस्थिति परिवर्तन गर्नेछ।
वास्तवमा, यो एक धेरै सरल र मनपर्ने व्यायाम हो। केहि सबटिलेटहरू जान्न पर्याप्त छ र सानो निर्देशन प्रयोग गर्नुहोस्। यस अवस्थामा, एक घण्टामा तपाईसँग एक उत्कृष्ट कृति हुनेछ। तर यस प्रक्रियालाई चरण-दर-चरण हेर्नुहोस्।
सुत्न को लागी एक तकिया मा एक तकियाकस कसरी सिलाईयो?
हामी हाम्रो तकियाको आकार निर्धारण गर्छौं। यो वर्ग वा आयताकार हुन सक्छ। हामी आधारको लागि 50x50 सेन्टिमिटरको आकार लिन्छौँ र हामी एक गंध संग तकियाको सिलाई सिनेछौं।
हामी ढाँचा बनाउँछौँ। यो आयताकार समावेश हुनेछ 120x50 को आयामहरूमा तीन भागहरूमा बाँधिएको आय। दुई भाग 50 सेन्टिमिटर हुनेछ, र गन्धको लागि 20 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ।
कपडाको तैयार कटाईमा, हाम्रो ढाँचा राख्नुहोस् र प्रत्येक चक्रको लागि 1.5 सेन्टिमिटर जोडेर चकमा चक्र गर्नुहोस्। हामीले तकियाकोस काट्यौं।
आयतको छोटो पक्षहरू सिलाई।
हामी टेबुलमा कपडा फैलाउँथे। बनाइएका अंकहरूमा हाम्रो विवरणहरू भित्रै राखिएको छ, सबै पछि फेरि लपेट्दा धेरै भाग र त्यसपछि एक गन्ध। हामी सुइलाई ठीक पार्छौं, साथसाथै स्लाइसको समकक्ष।
सीधा रेखामा कटौतीबाट 1 सेन्टिटरको दूरीमा र ओभरलेमा समाप्त सीम प्रक्रिया। यदि तपाइँसँग ओवरकॉल छैन भने, तपाईं हेममा एक सीम बनाउन सक्नुहुन्छ।
हामी समाप्त उत्पादनलाई अगाडि र फलाममा बारी गर्दछौं। कपासको बनाइएको तकियाको सिलाई गाह्रो छैन। यो गर्नका लागि, तपाईलाई कपडाको ठूलो कटा प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। एक पूर्व-तयार ढाँचाको अनुसार, तपाईं एक अलग टुक्राको टुक्राको प्रत्येक भाग काट्न र एकअर्कासँग विभिन्न भागहरू सील गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी तालाबारीको साथमा एक तकियाको सील गर्ने?
तकियाको 50x50 सेन्टिमिटरको आयाम लिनुहोस्। हामीलाई एक 100x50 ऊतक कटौती वा दुई 50x50 वर्ग चाहिन्छ। यसले तपाईंको आवश्यक टुक्राहरू छ कि छैन भनेर निर्भर गर्दछ। साथै, सबै-एक-एक जिपर 45 सेन्टिमिटर लामो समयसम्म आवश्यक पर्दछ।
हामीले ढाँचाको दुइटा विवरणहरू काट्यौं। हामी तिनीहरूलाई अनुहारमा अनुहारमा राख्छौं र हामी तीनवटा तिर घुमाउँछौ। चौथो पक्षमा, प्रत्येक पक्षमा4सेन्टिमिटर स्टिच गर्न पर्याप्त हुन्छ, मुख्य भाग खुला छ। हामी ओभरक्ले वा जियज्याग लाइनमा सास प्रक्रिया गर्दछौं। हामी पछाडिको अगाडि अगाडि छेउछौं। एक तकियाको खोलिएको भागमा हामी एक लक सिसा गर्दछौं।
शटलकक संग एक तकियाकस कसरी सिलाई र लक?
हामी अघिल्लो संस्करण प्रयोग गर्दछौं। शटललेक आधारभूत, परिष्करण कपडा वा सजावटी फीताबाट बनाइयो। चूंकि हाम्रो पाङ्ग्राकेसी को परिमिति 200 सेन्टिमिटर हुन्छ, हामीलाई समाप्त लेस को3मीटर चाहिन्छ।
हामी दुई चौडाईमा मुख्य कपडाबाट आयाम 50x50 सेन्टीमिटरको साथ काट्यो। धागामा रिंग र छरितोमा लस समाप्त भयो। हामी एक टुक्रा तकियाकोसेज र लेस् भित्र भित्रको छेउमा पुग्छ, समान रूपमा सम्मियाकोस को परिधि को आसपास सजावटी रचनाहरु लाई वितरण गर्दछ। अर्को, हामी पछाडि अगाडिको अगाडि दुईवटा विवरणहरू थप गर्दछौं र अगाडि टाँस्दै, लकको लागि खुल्ला काटी छोड्छौं। हामी पछाडिको अगाडि अगाडि छेउतिर फर्काउँछौं र लेस सीधा गर्छु। हामी लक सिसा गर्छौं। हाम्रो उत्पादन तयार छ।
एक स्क्रैपी प्रविधीमा एक तकियाकस सिलाई कसरी गर्ने?
यस उद्देश्यका लागि, तपाईं विभिन्न घरमा विभिन्न स्क्रैपहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं तिनीहरूलाई निश्चित चित्रण गर्न सक्नुहुन्छ वा अनियमित क्रममा सिधा गर्न सक्नुहुनेछ। समाप्त प्याचवर्कको तकियाको आकार भन्दा थोडा ठूलो हुनुपर्छ। तपाईंले यसलाई काट्नु अघि कपडा सुचारु गर्न निश्चित हुनुहोस्। माथि उल्लेखित आदेशमा हामी तकियाकोस सिलाई।
उत्तम विकल्प आधारभूत कपडाबाट बनाइने तकियाकोस हुनेछ, पुष्ट, कढाई वा सजावटी चोटी संग सजाइयो। तकिया कुनै पनि इंटीरियरको अपरिहार्य विशेषता हो। तिनीहरूका लागि केही सुन्दर तकियाहरू सिलाई, तपाईं उज्ज्वल तकिएहरूमा एक्सेन्टहरू बनाउन आफ्नो मनमा कोठाको रूप परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
नायकको पोशाक: हामी नयाँ वर्षको बिहानको प्रदर्शनको लागि तयारी गर्दैछौँ
सारा परिवारको लागि ओम्निबस बुनाई सुई संग बुनाई
मूल विचारहरू - के तपाईं कैंडी रैपर्सबाट गर्न सक्नुहुनेछ
चयापचय कसरी छिटो। विधिहरू
संलग्नहरू बिना: "GO सीएस" मा कसरी पैसा बनाउने?
Budgerigar। प्रजनन र हेरविचार
यसलाई चयन गर्न राम्रो छ कि दुई छोराछोरीको लागि बच्चाहरु फर्निचर?
Esthete - यो राम्रो सुनिन्छ!
एक रोल सिंगापुर मा कसरी बनाउन
"Cabrita" को एक मिश्रण: समीक्षा, संरचना, दर्जा
अभिनेता Shon Hetosi: जीवनी, पेसा, चलचित्र
पासपोर्ट मा कागजातहरू